သျှပ်၊ ဘဲဥ၊ ငှက်ကြီး
အဆိုတော်၊ တေးရေးသူ ၊ကဗျာဆရာ
ရော့ခ် ဂီတ၊ ပေါ့ရောခ် ၊ ဂျက်စ် ၊ bossa nova
ဂစ်တာ၊ ပီယာနို၊ ဒရမ် ၊ပက်ကားရှင်း ၊ဟာမိုနီကာ
မော်လမြိုင်မြို့တွင် ဂီတဆရာ ဦးအောင်စိုး (KC Francis) ထံမှ ဂီတ သင်္ကေတနှင့် ဂီတပညာ သင်ယူခဲ့သည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် နာရီပေါ်မှမျက်ရည်စက်များ စီးရီးဖြင့် ဂီတလောကသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ထူးအိမ်သင်သည် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းအများစုကို ရေးသားသီကုံးခဲ့ပြီး ဂီတပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သည်။ ထူးအိမ်သင်၏ အခြားတစ်ကိုယ်တော် တေးစီးရီးများမှာ မှော်ဆရာအိမ်မက်၊ သက်ငြိမ်၊ အတ္တပုံဆောင်ခဲများ ၊ အရင်အတိုင်း၊ စကားလုံးမရှိတဲ့ကောင်းကင်၊ မြို့ပြလရောင်တမ်းချင်း၊ ဝင်ရိုးစွန်းမီး ၊ အမေ (သို့မဟုတ်) မေတ္တာတော်ဘွဲ့၊ အစိမ်းရောင်ရက်စွဲများ၊ တစ်နေ့စာအလွဲများ၊ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထူးအိမ်သင်သည် ကဗျာများကိုလည်း ရေးသားခဲ့သည် ။
Min Zin (2002-09-01). "Burmese Pop Music: Identity in Transition". Irrawaddy News.
Kyaw Kyaw Tun။ "With Love:afinal farewell to the legendary Htoo Ein Thin"၊ The Myanmar Times၊ 2005-08-22။ Archived from the original on 2008-02-26။
Moe Moe Aung (April 2006). "Musical Bird That Has Flown Away" 3. Archived 29 April 2011 at the Wayback Machine.